रहिनन् विद्यावारिधी गर्ने पहिलो महिला डा. वानीरा गिरी - HongKong Khabar
रहिनन् विद्यावारिधी गर्ने पहिलो महिला डा. वानीरा गिरी
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १०, २०७८ समय: १४:४६:४२
काठमाडौं । विद्यावारिधी गर्ने पहिलो नेपाली महिला एवम् लेखक डा. वानीरा गिरीको हिजो आइतबार राती १० बजे हृदयघातबाट निधन भएको छ ।
७५ वर्षीया गिरीमा २० दिनअघि कोरोनासंक्रमण देखिएकिो थियो । तर निधनचाहिँ हृदयघातका कारण भएको उनको परिवारले जनाएको छ । ३ वर्षदेखि अल्जाइमर्स रोगबाट समेत पीडित गिरीलाई हृदयघात भएपछि नयाँबानेश्वरस्थित निजामती कर्मचारी अस्पतालमा पुर्याइएको थियो । अस्पताल पुर्याएको आधा घण्टामै निधन भएको थियो ।
उनी पीएचडी गर्ने पहिलो महिलाको रुपमा परिचित थिइन् । कवि गोपालप्रसाद रिमालमाथि शोध गरेबापत उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उपाधि प्राप्त गरेकी थिइन् ।
उनका श्रीमान, एक छोरा र एक छोरी छिन् ।
वानीरा फाउन्डेशनले उनीबारे यस्तो लेखेको छ,
डा.गिरीका पति इन्जिनियर शङ्कर गिरीको प्रबल इच्छामा २०७६ सालमा वानीरा फाउन्डेशनको स्थापना भएको थियो । सो फाउन्डेशनको पूँजी राशि झन्नै सात करोड रुपियाँ बराबर रहेको छ ।
डा.गिरीलाई २०७१ सालमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाद्वारा त्रिमूर्ति निकेतनको आयोजनामा रथारोहण गराइएको थिए । त्यही अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाबाट डा.गिरी पाँच लाख रुपियाँ राशि सहित ‘नेपाली साहित्यका विश्व नारीरत्न’को उपाधिद्वारा सम्मानित भएकी थिइन् । सोही अवसरमा कोइरालाले डा.गिरीलाई उनकै उचाईको ताम्रपत्रसमेत समर्पण गरेका थिए ।
डा.गिरीका कविता, निबन्ध र उपन्यास गरेर १४ वटा कृति प्रकाशित छन् । उनका कृति विश्वका विविध भाषामा अनुवाद भएका छन् । नरेन्द्रराज प्रसाईद्वारा डा.वानीरा गिरीको जीवनीकृति ‘विश्व नारीरत्न वानीरा गिरी’ (२०७०) प्रकाशित भयो भने सो कृतिको अङ्ग्रेजी भाषामा (२०७८) दुर्गा वनवासी शिवाकोटीबाट अनुवाद भएको छ ।
नेपाल राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठानबाट २०२२ सालमा आयोजित ‘प्रथम कविता महोत्सवमा भैरव अर्याल प्रथम र वानीरा गिरी दोस्रो भएका थिए । कञ्चन पुडासैनीका अनुसार ‘सो महोत्सवमा वानीरा गिरी नै प्रथम भएकी थिइन् । तर प्रवासी नेपालीलाई प्रथम कविता महोत्सवमा नै प्रथम पुरस्कार दिन मिल्दैन भन्ने प्राज्ञहरूवीचको मतमतान्तरका कारण उनलाई दोस्रो पारिएको थियो ।’ त्यतिखेर बानीराको कविता सुनेपछि राजा महेन्द्रले उनलाई नेपालमा नै बस्ने आग्रह गरेका थिए ।